Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » E gbochiri igbu onwe COVID-19 maka nne na nwa
Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
COVID-19 igbu ọchụ igbu onwe onye - ikike site na Pattaya Mail
Na Pattaya, Thailand, enwere ike igbu onwe COVID-19 igbu ọchụ mgbe otu nwanyị kwụsịrị igbu onwe ya na nwa ya nwoke n'ihi ọnọdụ enweghị olileanya nke COVID-19 kpatara.
Achọpụtara otu nwanyị dị afọ 35 dị ka Dao, onye Laotian, onye ya na nwa ya nwoke dị afọ 7 na-ebe akwa na mpụga Tuanthong na Pong Subdistrict setịpụrụ igbu mmadụ igbu onwe COVID-19.
Otu ìgwè ụmụ nwanyị hụrụ ha abụọ ka ha na-ebe ákwá, Dao gwara ha na ya na-aga ọdọ mmiri Mabprachan ka mmiri rie ha abụọ.
Ọ zoro aka na atụmatụ ọzọ ị ga-ebugharị n'ihu nnukwu ụgbọala na-agba ụkwụ 18 na ịnyịnya ígwè ha.
Di Dao dị afọ 51, Krit Banjong, na-arụ ọrụ dịka onye nche, agbanyeghị, ọ tufuru ọrụ ya na agba nke atọ nke COVID-19 n'ihi layoffs. O kwuru na ha enweghị ego ha ji akwụ ụgwọ ụlọ ha ma ọ bụ iji zụta nri ma ọ bụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Onyeisi obodo Pong Moo 4, Ekachai Eimreung, bịarutere ebe ahụ na Soi Mabprachan Lang 3 iji nye ha nri na 500 baht iji mee ka ha gafee n'abalị na nkwa ịgwa onye nwe ụlọ ya banyere ịkwụsịtụ oge ịkwụ ụgwọ ego ezinụlọ ahụ. Onye nwe ulo ahu kwere ka ha wepu ego ulo ha maka oge.
Otu n'ime ụmụ nwanyị ndị si na otu ahụ hụrụ ya ebe ọ na-ebe ákwá rutere n'ụlọ ezinaụlọ ahụ ya na ndị enyi ya wee nye Dao nri, mkpa, na ego nke kwere nkwa na ya agaghị anwa imerụ onwe ya ma ọ bụ nwa ya nwoke ahụ ọzọ.